युगपत्रवैचारिक परिवर्तनको तीव्र प्रवाह - युगपत्र
वैचारिक परिवर्तनको तीव्र प्रवाह
आदर्शसमाज दैनिक पोखराबाट प्रकाशित हुने अखबार हो । प्रारम्भमा यो पाक्षिक अखबार थियो । त्यसको प्रकाशन प्रारम्भ हुँदा मेरो पढाइ आई.एस्सी. सकेर बी.एस्सी. पढ्न सुरु गर्ने समय थियो । केही वर्ष मेरो कलम तिखार्ने एवं अभिव्यक्ति खार्ने माध्यम बनेको थियो आदर्शसमाज ।
केही दिन पहिले काठमाडौँको विमानस्थलमा आदर्शसमाज दैनिकका सम्पादक/प्रकाशक कृष्णप्रसाद बाँस्तोलासँग भेट भयो । भेट नभएको एक दशकभन्दा बढी समयावधि भइसकेको रहेछ । पूर्वनिर्धारित उडान समयभन्दा साडे दुई घण्टा ढिलो विमान उडेको हुनाले कुराकानी गर्ने समय प्रशस्त मिल्यो । उहिल्यै म पोखरामा रहँदाका विभिन्न प्रसङ्ग र सन्दर्भ बाँस्तोलाजीको स्मरणमा रहेछन् । ती कुराहरू सुनाउनु भयो । मेरो लेखनीबाट तयार भई २०५३ सालमा आदर्शसमाजमा प्रकाशित भएको लामो लेख “धर्म र विज्ञान” प्रकाशित भएपछिको सन्दर्भ उहाँले स्मरण गरी बताउनुभएको यहाँ उल्लेख गर्दैछु ।
धर्म र विज्ञानको अन्तःसम्बन्ध विश्लेषण गरी ती दुईको तादात्म्य देखाइएको (अचेल थप स्पष्ट तरिकाले सातत्यको सम्बन्ध भनी व्याख्या गरिएको) उक्त सामग्री प्रकाशित भएपछि पोखराको बौद्धिक भनाउँदो तप्कामा राम्रै वादविवाद भएको थियो । मैले “वैज्ञानिकतायुक्त धर्म धार्मिकतायुक्त विज्ञान” भनेर जोड दिएको थिएँ । सानो समूहले मात्र मेरो दृष्टिकोणको समर्थन गरेको थियो । अचम्मसँग धार्मिक संस्थाहरूका हर्ताकर्ता र प्रगतिवादी/वामपन्थी भनाउँदाहरूमध्ये अधिकतरले मेरो दृष्टिकोणको विरोध गरेका थिए । तिनीहरूको अन्य कुरामा आपसी मिल्ती थिएन, तर धर्म र विज्ञानलाई जोड्ने मेरो विश्लेषणको विरोध गर्नमा उनीहरूको गठबन्धन जस्तो देखिएको थियो । धर्म र विज्ञानलाई जोड्नु हुँदैन भन्ने तिनीहरूको जिरह थियो । कतिपयले त सम्पादकलाई भेटेर वा पत्र लेखेर समेत विरोध व्यक्त गरेका थिए भन्ने स्मरण बाँस्तोलाजीले गर्नुभयो । “त्यो बेला तपाइँको विरोध गर्ने तिनै मान्छेहरूका मुखबाट अचेल तपाइँकै दृष्टिकोण बोलिएको सुन्दा समय कति परिवर्तनशील रहेछ भनेर अचम्म लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विज्ञान र धर्मलाई जोड्ने कुरा ‘फेशन’जस्तो भइसकेको आजको परिवेशमा अचम्म लाग्न सक्छ, तर त्यो बेला अर्कै परिवेश थियो । धर्म र विज्ञान भनेका बिल्कुलै अलग अलग हुन् भन्ठान्ने मतको दबदबा थियो त्यो बेला । हामीले त्यस्तो वैचारिक जाललाई तोड्यौँ । करिब २५ वर्ष पहिल्यै जुन दृष्टिकोण अगाडि सारियो, त्यसको क्रमशः मूलप्रवाहीकरण भएको छ । वैचारिक परिवर्तनको तीव्र प्रवाह हामीले देख्न पायौँ । अन्य धेरैवटा सवालमा पनि यस्तो परिवर्तन भएको छ । थप कतिपय सवालमा वैचारिक परिवर्तन सफल हुने क्रममा छ । धेरै क्षेत्रमा वैचारिक जाल तोड्न सकेका छौँ र अझै धेरै क्षेत्रमा तोड्नु छ ।
“धर्म र विज्ञान” शीर्षकमा तत्कालीन आदर्शसमाज पाक्षिकमा प्रकाशित त्यो लामो लेख अन्य धेरैवटा पत्रपत्रिकामा पटक पटक प्रकाशित भयो । सोही सामग्री “वैज्ञानिकतायुक्त धर्म धार्मिकतायुक्त विज्ञान” शीर्षकमा पुस्तिकाको रूपमा पनि प्रकाशित भयो । अहिले पनि “विज्ञान, भक्ति र धर्म” पुस्तकको एक अंशको रूपमा त्यो सार्वजनिक छ । धर्म र विज्ञानको सातत्यको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो ।
प्रकाशित : २०७८ भाद्र २७, आईतवार